Dhacdo kale oo xanuun badan oo ku dhacdey qoys Somali ah - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dhacdo kale oo xanuun badan oo ku dhacdey qoys Somali ah
Waxa magaalada Nayroobi ee dalkaasi Kiiniya ka dhacdey dhacdo aad u foolxun oo ku dhacdey qoys Somali ah kadib markii gabadh 14 jir ah la diley isla markaana la jarjaray jirkeeda.
Dhacdadaan xanuunka badan ayaa imaanaysa ayadoo shalay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug lagu diley kadib markii la kufsadey oo la jarjaray jirkeeda gabadh yar oo 12 jira. Waxa Gaalkacyo ka jirta murugada gabadhaas yar
Gabadhan lagu diley Nayroobi ee la jarjaray jirkeeda ayaa lagu magacaabi jirey Ismahaan.
Ehelka Gabadha waxa ay sheegeen dilkeeda ka dambeysay Haweeney ay qaraaba ahaayeen oo ay la joogtay isla markaana la jarjaray waxana Hooyadeed ay ku nooshahay Xeryaha Qaxootiga Kaakuma halka Aabaheed uu ku nool yahay magalaada Jigjiga.
Ehelada Gabadha la dilay ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan ogeyn waxa loo dilay, kuna baaqeen in cadaalada la mariyo kuwa sidan foosha xun u galay. Haweenayda dilka gaysatey ayaa la qabtey. Waa dhacdo aad looga naxo ayay tiri Muxubo Cali dhaqana uma lihin.